China Flawless oil-free matte Liquid foundation Rakotra feno 20ml fototra maharitra maharitra ho an'ny makiazy miaraka amin'ny orinasa sy mpamokatra SPF15 | Jinfuya
mihasimba Famaranana matte, fandrakofana feno, malefaka, maharitra maharitra, tantera-drano, famaranana tsy misy fotony. Milanja maivana, raikipohy tsy misy solika ， Miaraka amin'ny SPF15
Mety amin'ny Ny alokaloka maherin'ny 40 dia mety mifanaraka amin'ny volon'ny hoditra rehetra
Atiny Net 0,68 fl. oz. (20 mL)
asa Mamerina ny volon-koditra tsy mitovy, ny formula Liquid tonga lafatra amin'ny karazana hoditra rehetra
Ny Fototra vita tsy misy kilema no fitaovam-piadiana miafinao hampandroso ny tarehy tsara indrindra. Ny masomboly masina misy ny fanakona feno, ity famolavolana ranon-dronono ity dia mipetaka amin'ny hoditra toy ny nofy - mametraka ny sehatra ho amin'izay rehetra irin'ny fonao. Ho an'ny fandrakofana somary matevina, afangaro amin'ny moisturizer isan'andro. Ho an'ny famirapiratry ny ando, afangaro amin'ny menaka manitra manjelanjelatra. Apetraho miaraka amin'ny fampiharana vovo-jiro maivana ho an'ny fomba minimalista, na mandehana matanjaka miaraka amin'ny molotra Mena sy eyeliner mainty ho an'ireo maximalista feno.
Ny fototray dia mahatonga ny hatsarana tsara indrindra ho azon'ny tarehy rehetra. Ny maha-izy anao dia tsy misy fetra, ary aingam-panahy izahay amin'izay mampiavaka anao. Avy amin'ny mpikaroka tany am-boalohany ho an'ny hatsaran-tarehy junkie-glam hatsaran-tarehy na miboridana tarehy, minimalist, maximalist ary ny fijery rehetra eo anelanelan'ny-isika dia ho an'ny maso, molotra ary tarehy tsirairay. Mirehareha fa tsy misy vegan sy tsy misy habibiana 100%, manerantany.
1. Ny maivana maivana, rakotra feno, tsy misy menaka dia mifangaro voajanahary amin'ny hoditra ho an'ny famaranana semi-matte tsara tarehy izay maharitra tontolo andro.
2.Ny famolavolana liquid dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny volon-koditra sy ny tonon-koditra ho an'ny hoditra mazava kokoa.Manome SPF-15 hiarovana ny hoditrao amin'ny fahasimban'ny masoandro.
3. Tsy misy cruelty, vegan ary 100% afaka amin'ny Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, ary Hydroquinone.
Fitsapana amin'ny sandry
Teo aloha: Fandraisana an-tsokosoko ranon-javatra 6ml matte farany famaranana maharitra 16 ora endrika miafina maharitra miaraka amina kalitao avo lenta
Manaraka: Wholesale Silky Liquid Foundation 8 miloko tsy misy lanjany 30ml miaraka amina volon-koditra voajanahary sy Formula Moisturizing
Solosaina miorina amin'ny Liquid Foundation
Fototra miorina amin'ny solika
Fananganana Liquid Foundation
Fanadiovan-tsolon'ny molotra manadio ny molotra Vegan Mak ...
Custom Logo Matte lipgloss Maharitra 40 Colo ...
Label tsy metaly metaly famolavolam-bolo, Vegan C ...
Famaritana marika manokana momba ny marika malefaka marefo amin'ny tantera-drano tsy misy rano ...